စမတ်ကျကျ အလုပ်လုပ်ရအောင် | Commerce
Fri, 11/15/2019 - 04:31 -- admin_ygn
ကျွန်တော်တို့အစိုးရဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများတွင်မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရသောအလုပ်တစ်ခုမှာ အစည်းအဝေးတက်ရခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ လိုက်ရခြင်း၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို တင်ပြရခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ရခြင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ အချို့အစည်း အဝေးများသည် အချိန်ကြာမြင့်ခြင်း၊ တက်ရောက်သူ များပြားပြီး ဆွေးနွေးသည့်အချက် များပြားခြင်းတို့ကြောင့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလိုက်ရသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ပြုစုရသည့် ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်၊ အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ရန်၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများကို နားလည်ရန်လိုအပ်သည့်အပြင် အချိန်ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ နောက်ထပ် လုပ်ငန်းများ၊ အစည်းအဝေးများမတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများထံ တင်ပြနိုင်ရန် လည်းလိုအပ်ပါသည်။ မှန်ကန်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားအလုပ်တာဝန်များပါ ပူးတွဲဆောင် ရွက်ရသည့်အခါများတွင်လည်းကောင်း၊ ဆောင်ရွက်ရသည့်အခါတွင် ဝန်ထမ်း များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းရန် ပိုမိုလိုအပ်လာပါသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရန်အပြင် သပ်ရပ်သားနားစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း Smart Work ကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အလုပ်လုပ်ရာတွင် ကြိုးကြိုးစားစား ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ကြရသည်ကို ဂုဏ်ယူတတ်ကြပါသည်။ တစ်နေ့ လျှင် နာရီပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ဂုဏ်ယူပြောတတ်ကြပါသည်။ နေ့စဉ်ရက် ဆက် ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန် လှုပ်ရှားရသည်ကို ကျေနပ်တတ်ကြပါသည်။ ထိုသို့ အလုပ်လုပ်ရာတွင် နဖူးမှချွေး ခြေမ ကျသည်အထိ အလုပ်လုပ်သည်ဟု ဂုဏ်ယူပြောတတ်ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ထိုအယူအဆများသည် အလုံးစုံမှန်ကန်ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့လာနေရပြီ ဖြစ်ပါ သည်။ ကာယလုပ်သားများတွင်လည်း လေးလံသောတူကြီးများကိုကိုင်၍ ထုနှက်ရသည်မျိုးမရှိတော့ဘဲ စက်ကိရိယာများ သုံးပြီး ကာယအားကိုလျှော့ချနိုင်လာပြီဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်သည်မှာ ကာယလုပ်သားများထက် ဉာဏ လုပ်သားဟုခေါ်တွင်သော ဝန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်တစ်ခုကို အပြင်းအထန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သော်လည်း အချိန်မီမပြီးစီးခြင်း၊ ပြီးစီးသော်လည်း မသပ်ရပ်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းများကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ အလုပ်များကို စမတ် ကျကျပင်ပန်းမှု နည်းနည်း၊ အောင်မြင်မှုများများ ဖြင့် ကောင်းမွန်သေချာစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်မှာ အောက်ပါအချက် ၁၀ချက်ကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်-
- Trim the fat. ချွေတာပါ၊
- Measure your results, not your time. အချိန်အစား ရလဒ်ကို တိုင်းတာပါ၊
- Have an attitude adjustment.သဘောထားကို ပိုကောင်း အောင် ညှိနှိုင်းပါ၊
- Communicate,communicate,communicate ဆက် သွယ်ပါ၊ ဆက်ဆံပါ၊ အပေးအယူမျှတပါ၊
- Create and stick toaroutineလမ်းကြောင်းတစ်ခု တည် ဆောက်ပါ၊
- utomate more tasks အလုပ်များစွာကို အလို အလျောက် လုပ်တတ်ပါစေ။
- Stop multitasking. အလုပ်များစွာ လုပ် ခြင်းကိုရပ်ပါ၊
- Take advantage of your procrastination.အချိန်ဖြုန်း ခြင်းကို ကျော်လွွှားလိုက်ပါ၊
- Relieve stress စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့လိုက်ပါ၊
- Do more of the work you enjoy. ပျော်ရွှင်အောင် အလုပ် များကို ပိုလုပ်ပါ။
မလိုအပ်သော အရာများကို ဖယ်ရှားပါ
အထက်ဖော်ပြပါ အချက် ၁၀ ချက်မှအားလုံးကို အသေးစိတ် တင်ပြခြင်းမပြုဘဲ အချက်အချို့ကိုသာ ရှင်းလင်းတင်ပြ သွားလိုပါသည်။ အဆိုပါအချက်များမှ Trim the fat ဆိုသည်မှာမလိုအပ်သည့်အရာများကို ဖယ်ရှားစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် မလိုအပ်သည့် အပိုကုန်ကျစရိတ်များ၊ မလိုအပ်သည့်အချိန် ဖြုန်းတီးသည့် ကိစ္စများ၊ မလိုလားအပ်သည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလျှော့ချသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်တစ်ခု လုပ်ရန်ရှိလာသည် နှင့် တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်ကိုမည်သို့ စတင်ရမည်မှစကာအတွေးပေါင်းများစွာ ဝင်ရောက်လာတတ်ပြီး မည်သည်ကစတင်ရမည် ကိုပင် တွေးရခက်သည်မျိုးကြုံတတ်ပါသည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ အလုပ်တစ်ခုဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည်နှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ဆိုင်သောဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် To-Do-List ကို သေချာရေးမှတ်သင့်ပါသည်။ ထိုအထဲမှ လုပ်ငန်း ရည်မှန်းချက်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်နိုင်မည့် အရေးအကြီးဆုံးသုံးလေးခုကို ရွေးချယ်ပြီး အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အချိန်၊ ငွေကြေး၊ လုပ်အား များကို ချွေတာနိုင်ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်း တိုးတက် စေပါသည်။ မလိုအပ်သော အပိုအလုပ်များကို လုပ်မိခြင်းမှလည်း ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်ကုန်ခြင်းအစား ရလဒ်ကို တိုင်းတာပါ
Measure your results, not your time..အချိန်အစား ရလဒ် ကို တိုင်းတာပါဆိုသည့်ကိစ္စမှာ ရုတ်တရက် တစ်ခုစီ စဉ်းစားလျှင် ရလဒ်သည် အရေးကြီးသကဲ့သို့ အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာသုံးစွဲရေးသည်လည်း အရေးပါပါသည်။ သို့ရာတွင် အလုပ်တစ်ခုကို တိုင်း တာရာတွင် အချိန်မည်မျှသုံးပြီးပြီ၊ အချိန်ပိုဆင်းပြီး အလုပ်လုပ်ရတာမည်မျှရှိ ပြီဆိုသည့်အချက်နှင့် အလုပ်လုပ်သည်ဟု ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်ဆိုသည်မှာ ရလဒ်ဖြစ်သည့်အတွက် အချိန် များများကုန်ရုံဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ရလာသည့် အောင်မြင်သော ရလဒ်များဖြင့် တိုင်းတာရပြီး ကြာမြင့်ချိန်နှင့် တိုင်းတာခြင်း မပြုရန် ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ရန်အတွက် အချိန်တိုနိုင်သမျှ တိုတိုနည်းနည်းဖြင့် ၁၀ဝရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မည် ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး၏ ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ပဉ္စင်းပျိုနှစ်ပါးသည် ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုဘယ်နှပတ်စိပ်သည်။ အချိန်မည်မျှကြာအောင် တရားထိုင် နိုင်သည်တို့ကို အပြိုင်အဆိုင်ပြောနေသည်ကို ဆရာတော်ကြီးကြားသည့်အခါ ဆရာတော်ကြီးက “တပည့်တော်တော့ အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပုတီးနှစ်လုံးကိုတောင်မပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘုရား၊ ဝါလည်း တော်တော် များနေပေမယ့် အဲဒီပုတီး နှစ်လုံးကို မပြီးနိုင်သေးတာပါ။ ကိုယ်တော်တို့ လည်း ပုတီးပတ်များဖို့၊ အချိန်ကြာကြာ ထိုင်နိုင်ဖို့ထက် တရားတကယ် ရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်”လို့မိန့်ခဲ့ကြောင်း ကြားဖူးပါသည်။ ဆရာတော်ကြီး ဆိုလိုသည်မှာ လည်း အချိန်ကုန်ခြင်းနှင့်အညီ အလုပ်ပြီး နိုင်ဖို့ လိုကြောင်းမိန့်သည်ဟု နားလည်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရုံး ဝန်ထမ်းများတွင်လည်း မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ် ဟူသော “မ” သုံးလုံး ဆောင်ပင်စင်ရတောင်မဆင်းရဲဟုဆိုပြီး နေထိုင်သည့် ဝန်ထမ်းများတစ်နေ့တခြား များပြားလာကြသည်မှာ စမတ်ကျအောင်အလုပ် မလုပ်တတ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေမည် ထင်ပါသည်။
အလုပ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ကိုင်ခြင်း ရှောင်ပါ
ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းတွင် အချက်အလက်အမျိုးမျိုး ရှိသော်လည်း အချိန်ဆွဲ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အလုပ်ကို နည်းနည်း လုပ်ပြီး အချိန်ဆွဲခြင်း၊ အလုပ်ချိန်တွင် အခြားကိစ္စများကိုလုပ်ခြင်း (ဥပမာ- ဈေးရောင်းခြင်း၊ အပြင်ထွက်၍ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ ထမင်းကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ စားခြင်း) တို့ကိုဆောင်ရွက်ပြီးအလုပ်ချိန်ကုန်မှ အလုပ်မပြီးသဖြင့် အချိန်ပိုဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးသည်လည်း ရလဒ်ကိုနှောင့်နှေးစေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ရလဒ်ကိုစဉ်းစားသည့်အခါတွင် ရလဒ်ကောင်း ဖြစ်ရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပြီး လိုအပ်သည့်အချိန်ကိုမူ သုံးစွဲရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ် အများ အပြားကို လုပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း မတူညီသည့် အလုပ်များ ကို တစ်ပြိုင်နက်များစွာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မပီပြင်သော လုပ်ငန်းများ၊ ရလဒ်မရောက်သောလုပ်ငန်းများသာ များပြားနေပြီး အလုပ်မပြီးသဖြင့် မအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အဆင်မပြေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင်လည်း အပြီးမသတ်သော လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖောက်သည် ပျက်ခြင်းများ ကြုံလာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Take advantage of your procrastination ဟုဆိုသော အချိန် ဖြုန်းခြင်းမပြုရေးသည် အလုပ်တစ်ခုကို အောင်မြင်ရေး တစ်ခုသာ မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းကြီးများကို ဆောင်ရွက်ချင်လျှင် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ချင်လျှင်လည်း အလေးထားရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ဖြုန်းသူသည် အောင်မြင်မှုနှင့် မထိုက်တန်ပါ၊ စမတ်ကျကျ အလုပ်လုပ်လို သူနှင့် မထိုက်တန်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ စမတ်ကျကျ အလုပ်လုပ်လိုသူသည် အချိန်မဖြုန်းရန် လိုပါသည်။ ထို့ပြင် စမတ်ကျကျ အလုပ်လုပ်လိုသူ သည် အထက်ပါအချက် ၁၀ ချက် လုံးကို သေချာလိုက်နာရန်လိုပါသည်။ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြေလျှော့ရန်လိုမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ပြောရမည်မှာ အလုပ်ကို စိတ်ဖိစီးမှုများဖြင့် ပင်ပန်းစွာ၊ အချိန်လွန်မှ ဆောင်ရွက်မည့်အစား စမတ်ကျကျ အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ပါဟုလည်းကောင်း၊ အလုပ်များအောင်မြင်သဖြင့် ရရှိလာသော ပျော်ရွှင်မှု များ၊ ပီတိများကို စမတ်ကျကျ အလုပ်လုပ်ရင်း ရှာဖွေလိုက်ပါဟုလည်းကောင်း ပြောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျား။